Wɔsɛee Yerusalem (1-10)
Sedekia guanee na wɔkyeree no (4-7)
Wɔkae sɛ wɔmmɔ Yeremia ho ban (11-14)
Wɔrenkum Ebed-Melek (15-18)
39 Yuda hene Sedekia afe a ɛto so akron, bosome a ɛto so du no, Babilon hene Nebukadnesar* ne n’asraafo nyinaa baa Yerusalem, na wobetwaa ho hyiae.+ 2 Sedekia ahenni afe a ɛto so 11 mu, bosome a ɛto so anan, bosome no da a ɛto so akron no, wobuu kurow no afasu guu mu.+ 3 Na Babilon hene mpanyimfo nyinaa wuraa mu, na wɔkɔtenatenaa Mfinimfini Pon no mu.+ Wɔn ne: Nergal-Sareser a ɔyɛ Samgar no, Nebo-Sarsekim a ɔyɛ Rabsaris* no, Nergal-Sareser a ɔyɛ Rabmag* no, ne Babilon hene mpanyimfo a aka nyinaa. 4 Bere a Yuda hene Sedekia ne asraafo no nyinaa huu wɔn no, woguanee.+ Wofii kurow no mu anadwo. Wɔrekɔ no, wɔfaa ɔhene turo no mu, ɛnna wɔkɔfaa ɔpon a ɛda afasu abien no ntam no mu, na wɔde wɔn ani kyerɛɛ Araba kwan so.+ 5 Nanso Kaldeafo asraafo no taa wɔn, na wɔkɔtoo Sedekia wɔ Yeriko sare so.+ Wɔkyeree no de no foro kɔmaa Babilon hene Nebukadnesar* wɔ Ribla,+ Hamat asaase so,+ na ɛhɔ na obuu no atɛn. 6 Na Babilon hene ma wokunkum Sedekia mma mmarima wɔ n’anim wɔ Ribla hɔ, na Babilon hene ma wokunkum Yuda adehye nyinaa nso.+ 7 Afei ɔsɛee Sedekia ani maa n’ani furae. Owiei no, ɔde kɔbere nkɔnsɔnkɔnsɔn guu no, na ɔde no kɔɔ Babilon.+ 8 Na Kaldeafo no hyew ɔhene fi* no ne ɔmanfo no afi,+ na wodwiriw Yerusalem afasu no gui.+ 9 Na awɛmfo so panyin Nebusaradan+ faa ɔmanfo a wɔaka wɔ kurow no mu, ne wɔn a wɔde wɔn ho kɔmaa no, ne wɔn a wɔkae nyinaa, na ɔde wɔn kɔɔ Babilon. 10 Nanso awɛmfo so panyin Nebusaradan gyaw ɔman no mu ahiafo a wonni hwee no bi wɔ Yuda asaase no so. Saa da no, ɔmaa wɔn bobe mfuw ne nsaase a wɔbɛyɛ so adwuma.*+ 11 Na Babilon hene Nebukadnesar* kaa nea wɔnyɛ Yeremia kyerɛɛ awɛmfo so panyin Nebusaradan. Ɔkae sɛ: 12 “Momfa no na monhwɛ no; monnyɛ no bɔne biara. Nea obebisa mo biara, momfa mma no.”+ 13 Enti awɛmfo so panyin Nebusaradan ne Nebusasban a ɔyɛ Rabsaris,* ne Nergal-Sareser a ɔyɛ Rabmag* ne Babilon hene atitiriw nyinaa soma 14 ma wɔkɔfaa Yeremia fii Awɛmfo Aban no mu hɔ+ na wɔde no maa Safan+ ba Ahikam+ ba Gedalia+ sɛ ɔmfa no nkɔ ne fi. Enti ɔtenaa nkurɔfo no mu. 15 Bere a Yeremia da so da Awɛmfo Aban no mu hɔ no,+ Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: 16 “Kɔ na kɔka kyerɛ Etiopiani Ebed-Melek+ sɛ, ‘Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Hwɛ, mmusu a mekae sɛ mede bɛba kurow yi so no, merema aba mu, na ɛrensi wɔn yiye; na saa da no, wubehu sɛ asi.”’ 17 “‘Nanso saa da no, megye wo,’ Yehowa asɛm ni, ‘na wɔremfa wo mma nnipa a wusuro wɔn no.’ 18 “‘Efisɛ sɛnea ɛte biara, meyi wo afi mu, na worenwu wɔ sekan ano. Wubenya wo nkwa* sɛ asade,*+ efisɛ wode wo ho too me so,’+ Yehowa asɛm ni.”
^ Tete Hebri nkyerɛwee no bi wɔ hɔ a, sɛɛ na wɔkyerɛw edin no: Nergal-Sareser, Samgar-Nebo, Sarsekim, Rabsaris.
^ Anaa “nkonyaayifo panyin (nsoromma mu hwɛfo panyin).”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nkoadwuma.”
^ Anaa “ahemfi panyin.”
^ Anaa “Wubenya wo nkwa sɛ biribi a wɔanya wɔ ɔko mu; Wobɛfa wo ho adi.”